kọmputa na ịntanetị | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akwụkwọ: kọmputa na ịntanetị
Ike Bank - gịnị ka ọ bụ? Banklọ akụ ike
Ihe na 15.09.2019 08.01.2020
Ọrụ siri ike na ngwaọrụ na-ewepu batrị ngwa ngwa. Ọtụtụ ndị abanyela na batrị 'nwụrụ anwụ' n'oge kachasị mkpa. O di nwute, obughi uzo mbu ma obu chaja. Olee otu esi…
Ntughari aka ederede. Mmemme ndị ga-enyere aka na nke a?
Mgbe ụfọdụ onye nwe kọmputa nkeonwe ya na-eche ihu bụ ọrụ siri ike na njirimara ya - ịsụgharị ederede ejiri aka dee gaa n'ụdị dijitalụ. N'ezie, ị nwere ike iji aka rụọ ọrụ a. Agbanyeghị, usoro a bara uru ...
Minecraft: mma agha. Etu esi enwetara mma agha na Minecraft
Mgbe izizi ị pụtara n’ụwa nke Minecraft, ịnweghị ihe ọ bụla. Hands ga - eji aka gị nkịtị wee nweta ihe mmalite gị iji nweta enyemaka mbụ nke ...
Anyị na-egwuri egwu maka nsonaazụ, ma ọ bụ Etu esi agbanyụọ mkpa na Sims-3?
Gini ka ndi mmadu choro? Enwere ike ịza ajụjụ a n'ụzọ dị iche iche, mana azịza ọ bụla ka ga-ezughị ezu. N'ihi eziokwu na anyị niile dị iche? Ee e, n’ihi na ebumnuche ndị a na-emekarị karịrị ụwa… Ọ bụ ya…
Esi jiri Kupọns na Aliexpress: ịzụ ahịa ahịa
Onye ọ bụla maara banyere ụdị azụmaahịa dị ka Aliexpress nwere ike ịchekwa ego na ịzụrụ. Maka ọtụtụ ngwaahịa na saịtị China a, ọnụahịa agbadalarị nke ukwuu karịa ọnụahịa ahịa. Ọtụtụ nọrọla kemgbe…
The Witcher 3: agagharị. “Akụ nke Count Royven,” akụkọ a na-achọ
"The Witcher 3" bụ egwuregwu na-egwu egwu tụrụ onye ọ bụla n'anya. N’ezie, akụkụ mbụ na nke abụọ nke ọrụ ahụ abụrụlarị omenkà, ma nke atọ tụgharịrị ịbụ nke ka mma, na-enye onye ọkpụkpọ ahụ nnwere onwe ime ihe na…
Kedu ihe bụ teletype na ekwentị mkpanaaka?
Usersfọdụ ndị na-eji ekwentị eme ihe, na-achọ ịbanye na ntọala ahụ, na-ahụ obere okwu mkpirisi TTY ma ọ bụ nkebi ahịrịokwu "Teletype mode." Ọzọkwa na ọkwa ọkwa nke ama nwere ike ịbụ akara ngosi njirimara. Gịnị bụ teletype dị na ekwentị? Gịnị kpatara…
Etu esi ewunye Google Chrome na komputa. Ntụziaka maka ndị mbido
Ọ nwere ike iju gị anya, mana taa abụghị ndị ọrụ niile maara ka esi wụnye Google Chrome na kọmpụta, na nke a n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ihe nchọgharị a abụrụla onye isi na - enweghị atụ n'etiti ...
Ihe ngosi ndị dị mma na usoro chọrọ maka Crysis 3
Nkpu Okwu a kariri aha onye na - agba ụta. Egwuregwu a na-enweta aha nsọpụrụ mgbe niile na nhọpụta "Ihe osise kachasị mma". Akụkụ ọhụụ na-esetịpụ ogige na-esote, nke onye ọ bụla na-eduzi ...
Etu esi enweta ego na akaụntụ PayPal site na Qiwi
Azụmaahịa Internetntanetị na-eto ngwa ngwa, na ọtụtụ ndị ọchụnta ego ịntanetị na Russia na-anwa ọ bụghị naanị ikpuchi ahịa ụlọ, kamakwa soro ndị ahịa si mba ọzọ rụ ọrụ. N'ezie, nke a chọrọ ikike ọ bụghị naanị iji ịgba ụgwọ ịgba ụgwọ America ...
Etu edebanye aha na "Mail": nkuzi maka ndị mbido
Taa, anyị ga-amụta otu esi edebanye aha na Mail. Na mkpokọta, maka ndị ọrụ dị elu, ọ nweghị ihe siri ike n'okwu a. Ọzọkwa, ha onwe ha nwere ike ịkọwara onye ọ bụla ụkpụrụ nke ndebanye aha, yana enyemaka ...
Xzọ 100% iji wepu obere akpa QIWI
Banyere usoro ịkwụ ụgwọ QIWI na Weebụ, ị nwere ike ịchọta ọtụtụ nde nyocha. Ọ bụghịkwa ihe niile dị mma, n'agbanyeghị usoro ndebanye dị mfe. Ajụjụ a ma ama na ndị nwụrụ anwụ kachasị ajụjụ n'etiti ndị ọrụ bụ “How ...
Ngwa ndị German na-achọkarị
Ihe na 15.09.2019 11.01.2020
Na ókèala ala anyị, enwere ike ịkpọ onye isi n'etiti ihe nchọta ọchụchọ ụlọ ọrụ Yandex, nke ụlọ ọrụ Google nke mba niile na-alụ ọgụ maka ikike inwe asọmpi. Ka anyị hụ ka ihe si dị ebe a…
Skrimer: gini bu gini?
Oburu na itugharia okwua site na bekee, oputara “onye nkpu”. Anyị na-anwa ime ka nkọwa ahụ dị mfe. Scrimer - kedu ihe ọ bụ? Ndi vidiyo ndi a bu ihe nlere dika odi. Akpa na ...
Kedu nke ka mma - PS3 ma ọ bụ Xbox 360? Na-achọ azịza
Ehee, anyị mechara chekwaa ego ma dịrịkwa njikere iji mezuo nrọ anyị ochie na ịzụta njikwa egwuregwu dị mma! Anyị dị njikere itinye onwe anyị n'ime ụwa egwuregwu na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ ma nyefee ya…
Akwa Ista n'ime egwuregwu - gịnị ka ọ bụ? Ista Ista nwere egwuregwu Outlast, Minecraft na egwuregwu GTA-5
“Ista Egg” bụ aha slang maka “Ista Ista” na egwuregwu, ihe nkiri na sọftụwia. Ọ bụ ụdị nzuzo, ọdịnaya nke na-adabaghị na ọdịnaya niile, anya dị ka enweghị atụ, mkparị na ọtụtụ mgbe ...
Warcraft 3 na-agbakwụnye ọzọ: Mkpọnaka oyi kpọnwụrụ. Nkọwa
Mgbasa ozi ndị ọzọ maka Warcraft 3: Akpọnwụ akpọnwụ malitere ịpụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo a tọhapụrụ egwuregwu mbụ ahụ. Ọbụna mgbe afọ iri gasịrị, ha ka na-ewu ewu. Emebere mkpọsa site na ndị egwu na ụlọ ọrụ egwuregwu ...
Etu esi egbochi mmadụ na "Kọntaktị": mụta ime "ndepụta ojii"
Taa, anyị ga-agwa gị okwu banyere otu esi amachibido mmadụ na “Kpọtụrụ”. Na mgbakwunye, ka anyị nwaa ịchọpụta ihe ọrụ a ga-enye anyị. Ọ gaghị abụ enweghị atụ ga-ejide ntị ...
"Logos nke USSR" - iwu nke egwuregwu
Y’oburu na obu onye nwe igwe eji eme ihe nke gam akporo os, I ghaghi nbudata ngwa ndi di iche iche, tinyere egwuregwu, ihe kariri otu. Taa, anyị kpebiri gị…
Gịnị bụ aha mmemme ahụ maka ịmepụta ihe ngosi? Nkọwa nke mmemme maka imepụta ihe ngosi
Mgbe ị na-ajụ maka aha mmemme maka imepụta ihe ngosi, ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọtụtụ mmadụ na-esonye na mmemme PowerPoint a ma ama sitere na Microsoft Corporation. Emebere ya maka imepụta ihe dị iche iche ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 1,447.